हामीलाई सरकार चाहियो !
प्रकाशित : 1:49 pm, बुधबार, वैशाख २२, २०७८
हामीलाई सरकार चाहिएको छ । एकदमै चाहिएको छ । किनभने हामीसँग अहिले सरकार छैन । हामीसँग श्वास फेर्ने हावा छैन । हामी मरिरहेका छौं । हामीसँग अरुले दिएका सहयोगहरु हातैमा भए पनि त्यसको प्रयोग गर्नको लागि कुनै प्रणालीहरु नै छैनन् ।
अहिले नै के गर्न सकिन्छ ? अहिले तत्काल ?
हामी सन् २०२४ सम्म कुर्न सक्दैनौं । म जस्ता मानिसहरुले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुनै पनि कुराको लागि कहिल्यै पनि अपिल गरौंला भनेर सपनामा पनि सोचेका थिएनौं । म व्यक्तिगत रुपमा त्यसो गर्नुभन्दा बरु जेल जान नै रुचाउँछु ।
यो संकट तपाईंको कारणले आएको हो । तपाईं यसको समाधान गर्न सक्नुहुन्न । तपाईं यसलाई अझ बिगार्न मात्र सक्नुहुन्छ । यो भाइरस डर र घृणाको वातावरणमा अझै धेरै फैलिन्छ । बोल्ने मानिसहरुको आवाज जब तपाईं दबाउनुहुन्छ, यो भाइरस झन् फैलिन्छ । आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा एउटै प्रेस मिट नगर्ने र प्रश्नहरुसँग सधैं भागेर हिँड्ने प्रधानन्त्री भएको बेला यो भाइरस झन् बढ्छ ।
तर, आज हामी घरमा, बाटोमा, अस्पतालका पार्किङहरुमा, ठूला–साना सहरहरुमा, गाउँहरुमा, खेतहरुमा र जंगलहरुमा मरिरहेका बेलामा– म, एक सामान्य नागरिक आफ्नो आत्मसम्मान निलेरै भएपनि अरु लाखौं मेरा सह–देशवासीहरु मिलेर भन्न चाहन्छु सर, कृपया छाडिदिनुस् । कम्तीमा अहिलेका लागि । म हात जोडेर भन्न चाहन्छु, छाडिदिनुस् ।
यो संकट तपाईंको कारणले आएको हो । तपाईं यसको समाधान गर्न सक्नुहुन्न । तपाईं यसलाई अझ बिगार्न मात्र सक्नुहुन्छ । यो भाइरस डर र घृणाको वातावरणमा अझै धेरै फैलिन्छ । बोल्ने मानिसहरुको आवाज जब तपाईं दबाउनुहुन्छ, यो भाइरस झन् फैलिन्छ । तपाईंले तमाम मिडियाहरुमा सेटिङ मिलाउँदा र तथ्यमा आधारित समाचारहरु अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुमा मात्र आउँदा यो भाइरसको गति झन् तीव्र हुन्छ । आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा एउटै प्रेस मिट नगर्ने र प्रश्नहरुसँग सधैं भागेर हिँड्ने प्रधानन्त्री भएको बेला यो भाइरस झन् बढ्छ ।
लाखौं मानिसहरुले अनाहक ज्यान गुमाउने छन्, यदि तपाईं जानुभएन भने । त्यसैले जानुस् । अहिले नै जानुस् । आफ्ना झोला तुम्बा बोकेर गइहाल्नुस् । आफ्नो आत्मसम्मानलाई कायम राखेरै जानुस् । तापईंको लागि सुन्दर जीवन बाँकी नै छ । ध्यान गरेर बस्न सक्नुहुन्छ । तपाईंले आफुलाई त्यो मनपर्छ भनेर भन्नुभएको पनि छ । अहिले जसरी ठूलो संख्यामा मानिसहरु मरिरहे तपाईंलाई पनि गाह्रो पर्न सक्छ । तपाईंलाई बाँकी जीवन सुन्दर ढंगले बिताउन गाह्रो पर्न सक्छ ।
तपाईंको पार्टीमा धेरै मानिसहरु छन्, जसले अहिलेको लागि तपाईंको ठाउँ लिन सक्छन् । जसले काम गर्न सक्छ उसले विपक्षीको साथ लिएर भए पनि अगाडि आउनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघको स्वीकृति लिएर तपाईंको पार्टीबाट जो आए पनि हुन्छ । र, आएर सरकार र संकट व्यवस्थापन कमिटिको नेतृत्व गरे हुन्छ ।
राज्यका मुख्य मन्त्रीहरुले आफ्ना प्रतिनिधिहरु निर्वाचित गरेर पठाउन सक्छन्, जसले गर्दा सबै पार्टीहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ । राष्ट्रिय पार्टी भएका नाताले कांग्रेस पनि कमिटिमा आउन सक्छ । वैज्ञानिकहरु, सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञहरु, डाक्टरहरु र अनुभवी कर्मचारीहरु पनि कमिटिमा बस्न सक्छन् ।
विपक्षी बिनाको लोकतन्त्रको तपाईं चाहना राख्न सक्नुहुन्न । विपक्षी नभएको लोकतन्त्र भनेको निरङकुशतन्त्र हो । र, यो भाइरसले निरङकुशतन्त्र मन पराउँछ ।
यदि तपाईंले अहिले नै यो गर्नुभएन भने यो संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको रुपमा हेरिने छ । विश्व माथी नै खतराको रुपमा हेरिने छ । तपाईंको अक्षमताले अन्य देशहरुलाई भारतमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खल्न जायज देखिने कारणहरु उपलब्ध हुनेछन् । हामीले धेरै लडेर ल्याएको सार्वभौमिकता संकटमा पर्नेछ । हामी फेरि उपनिवेश बन्नेछौं । यसको संभावना छ । यसलाई नजरअन्दाज नगर्नुस् । त्यसैले कृपया जानुस् । तपाईंले अहिले गर्न सक्ने सबैभन्दा जिम्मेवारपूर्ण काम यही हो । तपाईंले हाम्रो प्रधानमन्त्री बनिराख्ने नैतिक अधिकार गुमाइसक्नुभएको छ ।
« आइपीएल स्थगित हुँदा आयोजकलाई ३२ अर्ब नोक्सानी हुने
बेनी-जोमसोम सडक कालोपत्र शुरु, असारसम्म सक्ने लक्ष्य »